Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/07/2020)
Yini enye, ehamba ngesitimela njengoba Nomad has eziningi ezinye izinzuzo. Uthola ukuzwa konke isikhathi sakho, kanye izitimela ukukunikeza kungenzeka ukukwenza ngokushelela futhi ngaphandle kalula. Kungase kube kancane ngezikhathi ezithile, kodwa akukho ukucindezeleka kule modi ikhambo, kuyilapho izindiza kukhona okuhluke ngokuphelele uma. Uma ukuhamba izindiza, kukhona ukucindezeleka njalo Ukugcwala ngokweqile zezindiza kanye izinyathelo overzealous yezokuphepha. Yini enye, kwezinye izimo, uzothola endaweni oya kuyo ngokushesha uma uthatha isitimela!
Indlela Save Money lapho Wena zemininingwane Izikhangibavakashi njengoba Nomad
imali Iningi wachitha lapho zemininingwane Izikhangibavakashi njengoba Nomad iya ekamelweni ukubhuka. Nokho, uma ukubhuka amahostela, ungagcina imali eningi njengoba siphelela kakhulu ethengekayo kuka amahhotela futhi ngesipiliyoni kangcono futhi ongasoze ngaphezulu. Yini enye, uma uhamba wedwa, ongawabhuka iliphi igumbi nabantu abaningi kulo, okungukufa inketho eshibhe. Futhi usithemba, ungafuna lokhu ngoba lokhu uzokunika ithuba ukuzihlanganisa nabanye abavakashi abanazo.
Into elandelayo sekuqede ukonga wakho, kahle, yokudla. Ungagcina imali ku ukudla ngokulungiselela ukudla yakho ehostela noma ezindlini. emahostela amaningi amafulethi ukunikela emakhishini ongazisebenzisa mahhala. Yini enye, elinye ithuba le Ihostela iwukuba hang out nabantu futhi ulungiselele ezinye ukudla ukwabelana.
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi njengoba Tips Nomad
Khumbula ukukhanya travel. Uma kuzoba Nomad isitimela ukuhamba, uzoba isikhathi kulula kuphela ethwele yini edingekayo. Emahostela ukunikela eziningi Izinsiza ezibalulekile efana amathawula, hairdryers nokunye okunjalo, ngakho ungenawo ukuletha eyakho. plus, ngokuvamile baba imishini yokuwasha kanye dryers ongazisebenzisa ukuze euro noma ezimbili, ngakho asikho isidingo sokuthi kube khona izingubo eziningi kakhulu nawe noma. Uma ufuna ukuhamba nge izinto eziningi, ojosaka kungase kube isinqumo esihle.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-nomad-europe/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)